SIDA LOO DOORTO SAXAARID LOOGU TALAGALAY BAKAYLE IYO BARO MUSQUSHA - XOOLAHA
U dooro bakayle caruur ah oo baro musqusha
Waxyaabaha ku jira bakayle ee shuruudaha aqalka ama aqalka waxaan rabaa inaan u roonaado sida ugu macquulsan xoolaha, iyo naftooda. Sidaa darted, marka laga reebo helitaanka meel ku habboon oo lagu noolaan karo, waxaad u baahan tahay inaad barato si aad u difaacdo baahida meel gaar ah. Sida loo sameeyo tan, waxaan ka wada hadli doonaa maqaalkan.
Suurtagal ma tahay in la baro bakaylaha saxanka
Khamriga, inkastoo ay yihiin kuwo yaryar oo yaryar, ma ahan kuwo nacas ah, way fududahay in la tababaro oo la xusuusto amarrada, markaa waa in aysan jirin wax dhibaato ah oo barashada. Waxyaabaha ugu muhiimsani waxay tahay in saxaaradu ay ahayd qaab habboon, iyo inta lagu jiro sabirnimada tababarka waxaa lagu muujiyay qaybtaada.
Ma taqaanaa? Buugga Guinness ee Records ee qaybta "Labbis" ayaa calaamad u ah qoyska oo dhan ee kooxda la socota. Qofka rikoodhka ugu horreeya ee miisaanka culus wuxuu noqdey mid bakayl ah Emma, ​​kadibna wiilkeeda Roberto iyo, ugu danbeyn, wiilal awoowe Ralph. Qoyska rikoodhada rikoodhada ah ee ka soo jeeda dalal badan oo waaweyn oo ka soo jeeda wadamada UK, East Sussex County.
Waxaa lagama maarmaan ah in la baro 1-1.5 bilood jir, marka ay yaryar yaryar noqdaan kuwo madaxbannaan. Saaxiibayaal khibrad leh waxay ku talinayaan shakhsiyaad qaangaadhnimo ah (3 bilood) in la dhufto, haddii kale ragga ayaa si joogto ah u gartami kara dhulka si ay uga cabsiiyaan ragga kale.
Dooro qaabka saxanka
Waa sahlan tahay inaad dooratid "dheri" xayawaan, laakiin waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso dhowr waxyaalood:
waa inaysan jirin geeso fiiqan;
waa wax aan loo baahnayn in la qaato weel shimbireed (waa qabow);
cabirka saxda ah waa inuu ahaado mid raaxo leh.
Fiiri noocyada ugu fiican ee bakaylaha ornamental.
Taararka geeska ayaa ku haboon, sababtoo ah ma aha meel bannaan oo badan, waxaa lagu rakibi karaa dhammaad kasta oo ka mid ah qafiska xayawaanka. Qaybta danbe ee musqusha waa mid aad u sareysa, taas oo siinaysa xasillooni, marka laga reebo mararka qaarkood dib u dhac.
Saldhigyada tooska ah waxay leeyihiin ciriiri raaxo leh oo raaxo leh, leh dhinacyada sare ee la rabay. Waxaad ku rakibi kartaa meel kasta oo habboon ee xayawaanka, iyada oo aan walwal laga qabin in ay u rogi karto ciyaarta. Qeybta hoose ee qaansiidku waxay ka dhigaysaa qaabdhismeed mid deggan.
Iyadoo leh shabakad iyo mesh
Naqshadeeynta shabakada ama mesh, laga yaabo inay noqoto midka ugu fiican. Fiilistu ma qallajinayso, xitaa iyadoo la adeegsanayo dadaalka xayawaanka, maaddaama shabaqa la dhigo dusha sare. Xayawaanku waxay ku dhacaan godadka, xayawaankuna wuxuu yareyn karaa baahida dhowr jeer iyada oo aan khashkhasheynin boogaha.
Markaad dooranayso fiilo, waa in la ogaadaa in bakaylaha ay aad u xiiso badan yihiin: waxay dhadhamin karaan wax kasta oo xiiso leh. Taasi waa sababta maaddadu ay tahay, ugu horeyntii, ammaan.
Ma taqaanaa? Khamrigu inta badan waa sheekooyinka buugaagta carruurta - waa Alice ee Wonderland, Winnie Pooh, Peter Rabbit, iyo sidoo kale talooyin badan oo ka mid ah dadyowga adduunka. Aan la soconin feejignaantooda Farewy iyo Faransiiska Genevieve Yuri. Waxay bilowday inay qorto sheekooyinka ku saabsan qoyskii bakeylkii dib loo celiyay 1987, in ka badan labaatan sheekooyin ayaa la sameeyay ilaa taariikhda, iyo sheekooyin shakhsi ah ayaa la duubay.
Dhirta la kariyey waa mid nabdoon haddii si liidata liqo, waxay nuugaysaa ur wanaagsan. Saxarada la nuugo, granules wey bararaan, laakiin ha u cararin, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon in la nadiifiyo. Isku darka cusub ayaa lagu daraa meesha uu kuuskuusay, sidaas darteed, isticmaalka waa yar yahay. Guntooyinku waxay leeyihiin ur aan qoryo lahayn oo aan cabsiin karin ama xayawaanka xayawaanka ah.
Maadada iyo waraaqda
Maadada iyo waraaqda ayaa ku haboonaan karo sida fiilo, laakiin kiiskan ayaa saxaaradu waxay u baahan doontaa dayactir badan oo dhaqso ah. Qalabku ma nuugaan "boodhka" si aad u fiican iyo qoyaan, waxay u keceen.
Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso inaad ogaato inta sano ee bakaylaha ee noocyada kala duwan ee ku noolaanshaha.
Qayb ka mid ah qalabka isdabajoogga ah waxay diidi karaan inay u tagaan fiilo qoyan. Qalabkani wuxuu ku fiican yahay in la isticmaalo qaab dhismeedka mesh, oo aysan jirin xiriir toos ah oo fiilaha.
Caanaha fur furan waxay ku talinayaan daawashada qaybta, meesha uu ku xiran yahay baahidiisa. Ku rakib tuubada waa inay ahaataa meeshan, halkaasoo xayawaanka uu yahay mid raaxo leh. Milkiilayaasha badankooda waxay dhigaan weelasha musqusha ee dhowr meelood oo kala duwan, iyagoo diirada saaraya tuubbooyinka ay xayawaanka ka tagayaan.
Sida loo dhigo bakayle ah saxaarada: tilmaamaha
Maadaama ay bakaygu dabiici ahaan nadiifsan yahay, ayna u qaban karin baahida godka, ka duwan jiirka badan, tababarku maaha mid adag.
Tani waa in la sameeyaa marxaladaha:
Waa inaadan u oggolaan in marin-socodka guriga ku socdo ilaa uu ka soo baxo musqusha.
Haddii ilmuhu uu ku guuleystey inuu tago "bidix", waxaad u baahan tahay inaad soo qaadatid qashinkiisa kuna rid meesha loo baahan yahay si loo calaamadeeyo. Geli "dembiga" waa in si fiican loo nadiifiyaa.
Kormeerka qaybta, waxaad hagaajin kartaa daqiiqada marka uu ku lifaaqan yahay mandheerta, si tartiib ahna u wareeji meesha saxda ah.
Dabeecadaha dheef-shiidka xayawaanku waa sida ay u yareyn karto baahida isla xilliga cuntada cunista. Si loo fududeeyo xasuusinta goobta musqusha, waxaad ku rid kartaa weel haadi ku xigta.
Bilowga tababarka ma ahan in ay badanaaba bedelaan fiilaha, xayawaanku waa inuu si fiican u xasuustaa urkooda.
Markuu ilmuhu wax walba oo sax ah sameeyo, isaga kicin "cunto fudud".
Waa muhiim! Goobaha la duubay waxay leeyihiin nidaam qallafsan oo aad u jilicsan - adigu ma qaylin kartid, sababtoo ah tani ma xejin doonto geeddi-socodka, laakiin, liddi ahaan, waxay hoos u dhigi doontaa hoos-u-dhaca waxayna keenaysaa diiqadda xayawaanka.
Xasuusta degdegga ah ee booska ayaa si caadi ah ugu fadhisa dheriga ka dib socdaal ama qadada.
Video: sida loo tababbarayo bakayle si sax ah
Marka tabobarka, dhaliyaha cusubi waxa laga yaabaa inuu la kulmo dhibaatooyin qaar, laakiin midna waa inuusan sii deyn. Waxaa jira sharrax macquul ah waxkasta.
Sababaha dhaqdhaqaaqa mindhicirka ka baxa musqusha
Ilaa saddexda bilood, habka taranka ee ragga u bislaaday: si ay u tuuraan khilaafka ka imanaya dhulkiisa iyo inuu muujiyo joogitaankiisa, wuxuu tilmaamayaa dhulka oo dhan oo ku wareegsan. Xaaladdan oo kale, ragga waa in la ciriiriiyaa, haddii kale calaamadaha qurxooni ma ahan kaliya kaliya saxarada, laakiin sidoo kale guriga oo dhan.
Waxaan kugula talineynaa inaad aqriso sida aad u tababbaran laheyd guriga.
diidmada booska waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay xaqiiqda ah, sababaha qaarkood, xayawaanka, meesha aad dooratay waxaa si weyn u jeela;
Cabsida qatarta ah waxay keeni kartaa inay socoto musqusha; cabsi, jirro macquul ah, xaalado aan fiicnayn guriga dhexdiisa;
muuqaalka ah ee guriga ee bakayle kale ayaa ka dhigi kara xayawaanka ugu horeeya inuu dhajiyo dheriga si uu u muujiyo qofka cusub "qofka madaxda ah";
miyir-beelka ayaa ku dhaafi kara musqusha sababtoo ah khaladaadka milkiilaha: dhinacyada hoose ee taangiga iyo fiilo badan.
Waad ku saxi kartaa xaaladda adoo eegaya sababaha dhabta ah ee dabeecadahan oo kale iyaga oo tirtiraya. Waxaa muhiim ah in la jimicsado dulqaadka ugu badan, qofka shakiga ahna ma aha halka uu xayawaankuna noqon karo, sabir u saarista xayawaanka musqusha. Waa lagama maarmaan in si tartiib ah u dhaqmaan, laakiin si xeeladeysan.
Ku seexo saxaarad
Waxay dhacdaa in la gooyo halkii caadiga ahayd ee sariirta, oo ku haboon in lagu seexdo musqusha.
Soo ogow waxa ka dhacaya saxarada bakayle, iyo sidoo kale sida iyo sida loo daaweeyo shubanka ka soo jeeda hareerahaan.
jahwareerka ku jira qolka;
qashin ama wasakh aan qashin lahayn.
Marka aad iibsaneyso xayawaan, waa inaad isla markiiba tixgelisaa xajmiga gurigiisa mustaqbalka, adoo tixgelinaya meesha musqusha. Xayawaanku waa inaanay ku dhejin qayb weyn oo ka mid ah tuubada si ay xayawaanka u caddeeyaan meelaha cuntada, "qolka jiifka", "ciyaarta" iyo musqusha. Xayawaan yar oo aan si fudud u seexanaynin hurdada qoyan ama qashinka ah, waa in si joogto ah loo nadiifiyaa gurigeeda. Waxaad u baahan tahay inaad bedesho qashin saddex jeer toddobaadkii, maydh qoob-ka-nadiifinta - labadii toddobaadba mar.
Waa muhiim! Haddii balka loo isticmaalo qashin ku yaal qafis, looma dooranayo fiilo. Xasuusnow: hawlo kala duwan - qalab kala duwan.
Gebogebo: ha iloobin in nadaafadda nadaafadda ay sii kordheyso nolosha xayawaankaaga, iyo sababtoo ah qoyaan ama jeermiska cudurada wadnaha ee cayayaanka ah ee halis u ah caafimaadka qaybta ayaa kor loo qaaday. Ku siinta xayawaankaaga xayawaanka leh xaaladaha ku haboon ee xabsiga, waxayna ku farxi doontaa adiga iyo dadka aad jeceshahay wakhti dheer.
Qof walba wac Gabadhaydu si deg deg ah ayaa loo isticmaalay saxanka. Markii ugu horraysay waxaanu haynaa qadar yar oo waxaan ku shubay fiilaha. Oo markaan ogaaday meesha geeska laga jecel yahay inay tagaan musqusha, waxay ku ridaan weelka. Markii ugu horeysay waxaa jirey caruureed bisad, laakiin ma ahan mid ku habboon: waxaan bilaabay inaan qaadno saxanka oo dhan oo ka baxsan qafiska, tan iyo markii loo isticmaalay in lagu nasto saxaarada, badhkeena ayaa inta badan ka soo baxaya saxanka (waxay sidoo kale tagaan geeska) puddles badanaa waa la soo dhaafay. Kadibna, si aysan u jiidin, waxaan ka soo iibsaday gees ah oo waxaan ku xidhxidhay baararka qafiska. Ma aha mobile iyo ma jiraan barkado. Oo markay socoto socodkeed, way ku xanuunsanaysaa, laakiin markay timaaddo qafas-xayawaankaas oo kale ah, sida haddii ay ka baqayso inaysan waqti u haynin: D (sida balka ama fiilaha) ku riix geeska ku rid raso caadi ah kuna jiifso dusha nadiifka ah. Sidaa darteed, waxaynu haynaa wax. Maqaarka kaliya ee shelf labaad waa jilicsan, waxay jeceshahay hurdada halkaas. Xitaa hadda, haddii cuno cuno (ay ku jirto qolkayaga wejiga ah) iyo weeraro ka timaada, ka dibna waxay u guureysaa oo dhan oo dhan meel gees yar oo leh paws. Sidaas nadiif